Iindaba-Umahluko phakathi kweevalvu zebhola zeplastiki kunye neevalvu zebhabhathane zeplastiki kubunjineli behotele…
Umahluko phakathi kweevalvu zebhola zeplastiki kunye neevalvu zebhabhathane zeplastiki kubunjineli behotele…
Ivalve yebhola yeplastiki yenziwe ngevalve yebhola yeplastiki yePVC. Iivalve zebhola zeplastiki kunye ne-pvc zebhola zebhola zifanelekile ukungenelela kweendaba ezinobungozi kwinkqubo yokuthutha. Ubunzima bokukhanya kunye nokumelana nokugqwala okunamandla. Iivalvu zebhola zeplastiki zepneumatic kunye ne-pvc zebhola ze-pneumatic zebhola zisetyenziswa kwiindawo ezininzi, ezifana namanzi ahlambulukileyo ngokubanzi kunye neenkqubo zemibhobho yamanzi okusela akrwada, i-drainage kunye neenkqubo zemibhobho yogutyulo, ityuwa yamanzi kunye neenkqubo zemibhobho yamanzi olwandle, i-acid-base kunye neenkqubo zesisombululo sekhemikhali, njl. , Umgangatho wamkelwa luninzi lwabasebenzisi.
(1) Inkangeleko idibene kwaye intle.
(2) Umzimba ulula ngobunzima kwaye kulula ukuyifaka.
(3) Izinto eziphathekayo zicocekile kwaye azikho ityhefu.
(4) Ukuxhathisa okuqinileyo kwe-corrosion kunye noluhlu olubanzi lwesicelo.
(5) Ukunganxibi, kulula ukuqhaqha, kulula ukuyigcina.
Ivalve yeplastiki yebhabhathane yePVC ineengenelo zokuxhathisa okuqinileyo, ukuxhathisa ukunxiba, ubunzima bomzimba wevalvu, kunye noluhlu olubanzi lwezicelo. Isakhiwo somzimba we-valve samkela uhlobo oluphakathi, olulula ukuchithwa kunye nokulula ukulugcina. Iwafanele amanzi, umoya, ioyile, kunye neekhemikhali ezonakalisayo. ulwelo. Ivalve yebhabhathane yeplastiki yepneumatic inokulungelelanisa ngokuthe ngqo umthamo wokutshintsha ngomoya oxinanisiweyo. Ixhotyiswe nge-valve positioner yokufaka i-4-20mA yesiginali, enokulungelelanisa ukuhamba kweendaba, uxinzelelo, ubushushu kunye nezinye iiparitha. Isetyenziswa ngokubanzi kumanzi acocekileyo kunye nemibhobho yamanzi okusela akrwada. Umgangatho weenkqubo, imibhobho yokuhambisa amanzi amdaka, imibhobho yogutyulo lwelindle, i-brine kunye neenkqubo zemibhobho yamanzi olwandle, isiseko se-asidi kunye neenkqubo zesisombululo sekhemikhali kunye namanye amashishini sele eqatshelwe luninzi lwabasebenzisi.
Iimpawu zevalve yebhabhathane yeplastiki yepneumatic:
1. Izinto eziphathekayo zicocekile kwaye zingenabuthi, isakhiwo esilula, ubungakanani obuncinci, ubunzima obulula, ukusetyenziswa kwezinto eziphantsi, kunye nobukhulu obuncinci bokufaka;
2. Uxhulumaniso lwenziwa ngokudibanisa ama-flanges kuzo zombini iziphelo, ezilungele ukuchithwa kunye nokugcinwa, ukuxhatshazwa kokugqoka, ukuchithwa ngokulula, kwaye kulula kwaye kulula ukuyigcina;
3. I-valve ye-butterfly ye-PVC itshintsha ngokukhawuleza, ibuyele kwi-90 degrees, kwaye ine-torque encinci yokuqhuba.
I-4.I-valve ye-butterfly yeplastiki ye-pneumatic inezixhobo ezahlukeneyo zokukhetha ngokweendaba ezahlukeneyo, ezinokumelana nokugqwala okuqinileyo, ubungakanani obuncinci, obufanelekileyo kwiintlobo zemibhobho, kunye noluhlu olubanzi lwezicelo.